Posted by: Zakariya in Sahanka July 10, 2015	0 298 Views
Dhalinta soo koraysa ayaa helaya kaalintii waxbarashada iyo shaqada. Waa waxbarashadee, ilaa heer jaamacad ayaa laga helaa Baydhabo oo dhankii tacliinta waa laga haqab-tiray. Walow dhalinta qaarkeed ay u kaceen Xamar iyo dalal kale. Dharka siman ee Iskuullada oo ay ku hagoogan yihiin dhalinta; Hablo iyo inamo ayay dhaayuhu soo jiidanayaan. Kuwa gaadiid lagu galbinayo iyo kuwo gomodyadooda maalaya. Kuwaas oo kuu muujinaya in dalku uu hayo dhabihii Ilbaxnimada iyo horumarka.
Dhanka shaqada, waxay indhahaagu qabanayaan dhalin gafanayaal ah oo xoogooda maalaya. Dushana ka dhididaya. Kuuna sheegaya in shaqadu ay qofka ka dhigto gob, meertinimadana ay ka yeesho gun. “Nimaan dhidhin ma dhergo”. Waa howl-waleedka ay ku hal-qabsadaan. Ganacsiga sii butaacaya ayaana u sababa inay dhalintu kasii baxaan hadaltiradii una gudbaan howlbadni. Ganacsatada hirgalisay Is-kaashatooyinka ayaana looga mahad celinayaa, Eebe ka sokow.
Dhanka faya-dhowrka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, Baydhabo aad ayay uga talaabsatay. Walow dowlad dhexe oo si habsami leh u daboosha aanay jirin, hadana baahida caafimaadka in badan waa la daboolay. Dhaqaatiir Ruug-cadaa ah ayaana kalkaala faya-dhowrka Gobolka. Xarumo daryeelka hooyada iyo dhalaanka ayaa ku yaalla. Hey’ado NGO-lay ah ayaana qaar ka howl-gala.
Balse bu’da ay ku taallo Baydhabo ayaa ka dhigtay meel siyaasadu aanay ka maarmin. Dagaallo soo noq-noqda iyo nabad-galyo xumo ayaa kolkol ku fida magaalada. Ciidamada shisheeye ee ku sugan Dalka ayaa jooga afarta doc ee Magaalada lagasoo galo. Hub, qalab culus iyo ciidamo tababar iyo tayaba isku darsaday ayay wataan, hadana Amaanku wali gacan uguma jiro. Iyagaa naftooda iska kaa ilaalinaya. Aaway hadaba nabad-galyadii ay beesha caalamku ku sheegaysay? “Nabad ay ilaalinayaan iska daaye, inagaa nafteena ka ilaashana” ayay ku hadaltiroodaan reer Baydhabo. Taasna waxaa marag iiga dhigay markii aan, innagoo kasii baxayna magaalada ay na hakiyeen in saacado ah, iyagoo biyo dhaansanaysa. Hadaba, ma iyagaa isku danayna, mise ummadii la yidhi amnigooda suga ayay ka danaysnayaan?
Hadaba Baydhabo waxay leedahay, siyaasada gurracan ee ka jirta taas ooy la wadaagto Dalka ka sokow, mustaqbal ifaya. Yididiila nool iyo saadaal ayaan wacan. Maadaama ay dhalintoodii ay ku taagan yihiin qaban-qaabinta timaadadooda iyo sidii ay u hormarin lahaayeen dalka, gaar ahaan gobolkooda. Iyadoo xusid mudan tahay in Baydhabo tahay magaalo Soomaaliyeed oo isku lamaan satay in looga wada hadlo laamaha Afka Hooyo ee Maay iyo Maxaa tiri. Laanta Maayga ee Afkuna ay tahay xarunteeda koobaad.
Qalinkii; Ceyduruus Maxamuud Iimaan.
Next: Ugaarteennii MEE?! AAWAY?!